चिनियाँ सरकारी मिडियाको भारतलाई चेतावनीः लामो युद्धका लागि चीन पूर्णरुपमा तयार – Enepali News
चिनियाँ सरकारी मिडियाको भारतलाई चेतावनीः लामो युद्धका लागि चीन पूर्णरुपमा तयार
June 17, 2020 285
लद्दाखको गालवन घाटीमा भारत र चीनको सेनाको बीचमा भएको झडप भारतीय सेनाकै कारण भएको चीनको सरकारी मिडियाले बताएको छ । ग्लोबल टाइम्सले चीन र भारतको सीमामा लगातार तनावको कारण भारतीय सेनाको घमन्ड र दुस्साहस भएको जिकिर गरेको हो ।
चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले सैन्य टकराव दुवै देशको हितमा नभएको उल्लेख गर्दै लामो युद्धका लागि चीन पूर्णरुपमा तयार रहेको र आफूसँग अनुकूल परिस्थिति रहेको पनि दाबी गरेको छ ।
आफ्नो सम्पादकीयमा ग्लोबल टाइम्सले सीमा नजिक भारतीय सेनाले भौतिक निर्माण गरिरहेको र आफ्नो क्षेत्रमा समेत निर्माण कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । यही कारणले सो क्षेत्रमा तनाव भइरहेको उसको दाबी छ । किनभने चिनियाँ सेनाले भारतीय सेनाको निर्माण कार्य रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘पछिल्लो केही वर्षदेखि भारतले दुई गलत बुझाइका कारण सीमाका मुद्दामा सख्त रवैया अपनाउन शुरु गरेको छ । पहिलो, अमेरिकासँग बढ्दो दबाबका बीच चीन भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन र यस्तोमा भारतको उक्साहटको जवाफ दिने इच्छा राख्दैन ।
दोस्रो, केही व्यक्ति व्यक्तिहरुमा गलत बुझाइ रहेको छ कि भारतीय सेना चीनको सेनाभन्दा शक्तिशाली रहेको छ ।
यी गलत बुझाइले भारतीय सोचलाई प्रभावित गरेको छ र भारतको नीतिमा दबाब बढाएको छ । चीन र भारतको शक्तिबीचको अन्तर प्रष्ट छ ।
सम्पादकीयमा चीन गालवन भाटीमा तनाव कम भएको हेर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘हामीलाई आशा छ कि भारतले लद्दाख सीमामा तैनाथ सैनिक र इन्जिनियरहरुको राम्रो प्रबन्ध गर्नेछ । साथै, दुवै सेनाका अफिसरहरु बीच भएको उच्चस्तरीय बैठकमा भएको आम सहमतिलाई पालना गर्नेछ । यदी स्थिति शान्त भयो भने दुवै पक्षलाई फाइदाजनक साबित हुनेछ । यसका लागि दुवै देशको सेनाले प्रयास गर्नुपर्नेहुन्छ ।
ग्लोबल टाइम्सले भारतसँगको सीमा विवादको मुद्दामा चीनको जनतालाई सरकार र जनमुक्ति सेनामाथि भरोसा राख्न पनि अपिल गरिएको छ । सीमा विवादलाई सुल्झाउने दौरान चीनले क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई कायम राख्ने बताइएको छ । ‘चीनसँग आफ्नो जमिनको हरेक एक इन्चको सुरक्षा गर्ने ताकत र समझदारी रहेको छ र आफ्नो विरुद्ध कसैको पनि रणनीतिक चाललाई सफल हुन दिनेछैन,’ उसले भनेको छ ।
गालवन घाटीमा भएको झडपमा दुवै देशका सैनिक हताहत भएको बताइए पनि चीनले आफ्नो तर्फ भएको क्षतिको हालसम्म आधिकारिक संख्या खुलाएको छैन । भारतले भने झडपमा २० जनाको मृत्यु भएको र १५ जना बेपत्ता भएको बताएको छ ।
Prevगायक प्रमोद खरेल बने छोरीका बाबु, आफु बाबु बने पनि खुसि साट्न नसकेकोमा बने दु:खी
Nextक्वारेन्टिनमा बसेका ४४ वर्षीय पुरुषले गरे देहत्याग
नेपालमा विद्युतको संभावना देखाउने कुलमानको कार्यकाल सकिँदै
फेसबुकमा लाइभ भिडियो गरेर प्राण त्याग्ने यि २३ वर्षे एलिसाको यस्तो रहेछ भित्री पिडा, समस्या सुनेर कसका आँखा नरसाउलान्
कोरोना महामारीबीच जनकपुरमा मेला
बल्ल डराए ट्रम्प : इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा संकटकाल घोषणा (3399)
कोरोनाका कारण विदेशमा बसेका सबै नेपालीलाइ नेपाल फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना (2510)
कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन नै सुरु, चीन र भारतसहित ७ वटा कम्पनीमा उत्पादन हुँदै (2154)
तपाईंको यो वर्ष कस्तो हुँदैछ ? हेर्नुहोस् ओजराज उपाध्यायले लेखेकाे वार्षिक राशिफल (1915)
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल (1901)
O M G << हेलिकप्टरबाट उद्दार गरिएकी गर्भवती महिलाको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु: (1895)
सरिता गिरीविरुद्ध रमेश पर्साइले मुद्दा हाल्दै, साथ दिनेले सेयर गराै (1667)
ट्रम्प भन्छन् अब कोरोना निको पार्ने औसधि बनिसक्यो (1622)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1487)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1432)